ခင်မောင်စော (ဘာလင်) ● ရခိုင်ပြည်တွင်းရှိ ဘင်္ဂလီပြဿနာအကြာင်းရင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေဟာ ပညာကိုတန်ဖိုးထားသူများဖြစ်ခဲ့ကြလို့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်အတွင်းကလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာစအချိန်ကလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ထိပ်တန်းရာထူးများကို ရခိုင်အများစုက ရယူထားခဲ့ကြပါ တယ်။ မျက်မှောက်ခေတ်မှာကတော့ ရခိုင်ပြည်ဟာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုဒဏ်ကို အလူးအလဲခံနေရလို့ ပညာတတ်များအလွန်နည်း ပါးသွားပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ တရားဝင်စာရင်းအရ ချင်းပြည်နယ်ကို အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဒုတိယ အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ စာရေးသူရဲ့အမြင်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်လူမျိုးများဟာ လက်ရှိအခြေ အနေမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်၊ ပညာရေးအဆင့်အတန်း အနိမ့်ကျဆုံးပြည်နယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ အ ကြောင်းကတော့ ချင်းတိုင်းရင်းသားအများစုဟာ နိုင်ငံခြားမှာရောက်ရှိနေပြီး လူငယ်အများစုမှာလည်း သက်ဆိုင်ရာ ခရစ် ယာန်အသင်းများရဲ့ထောက်ပံ့မှုများကြောင့် နိုင်ငံတကာတွင် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိကြလို့ ချင်းပညာတတ်ဦးရေဟာ ရခိုင် များထက် များစွာသာနေပေလိမ့်မယ်။
ယခုခေတ်ရခိုင်လူငယ်များဟာ ပညာကောင်းစွာမသင်ခဲ့ရလို့ ဗဟုသုတလည်းနည်းပါးပြီး မိမိတို့၏သမိုင်းကိုမှ မိမိတို့မသိ တော့တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်နေကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာသိ ရှိရပါတယ်။ စာရေးသူ ရေးသားထားတဲ့စာတမ်းများစွာရှိပေ မဲ့ အဲဒီစာ တမ်းများဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားလို့ ပညာတတ်အလွန်နည်းပါးနေတဲ့ ယခုခေတ် ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားများ အတွက် အလှမ်းဝေးနေပေလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့်စာရေးသူဟာ ဒီစာတမ်းကို မြန်မာဘာသာဖြင့် တခါပြန်လည် ရေးသားရ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်ထဲကို မူဆလင်တွေ ဘယ်အချိန်ကစရောက်သလဲဆိုရင် အစောဆုံး ၁၆ ရာစု အလယ်ပိုင်းလောက်ကဘဲ ရောက် လာပါတယ်။ “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုသူများဘက်ကပြောနေကြတဲ့ ၈ ရာစု ၉ ရာစုက သင်္ဘောပျက် ဇာတ်လမ်းတွေဟာ ထိုးဇာတ် တွေဘဲ ဖြစ်ပါလိမ္မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အနောက်ဘင်္ဂလားနယ်ကို မူဆလင်ဘာသာရောက်တာဟာ ခရစ်နှစ် ၁၂၃ဝ နောက်ပိုင်းမှ ရောက်ပါတယ်။ အဲသလိုဆိုတော့ အရှေ့ဘင်္ဂလားနယ်ကို မူဆလင်ဘာသာ ဒီ့ထက် ပိုနောက်ကျပြီးမှ ရောက် လာမှာ သေချာပါတယ်။
ဘင်္ဂလားနယ်မှာ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၇၅ဝ ပြည့်နှစ်၌ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် “ပါလာ” မင်းများက “ပါလာအင်ပါရာ” ကို ထူထောင်ခဲ့တယ်။ ၁၂ ရာစုတွင် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် “ပါလာမင်းဆက်များ” ကို ဟိန္ဒူဘာသာဝင် “သေနမင်းဆက်” က ဖြုတ်ချပြီး ဟိန္ဒူအင်ပါရာကို ထူထောင်တယ်။ မူဆလင်များက ဟိန္ဒူ သေနမင်းဆက်ကိုဖြုတ်ချပြီး မူဆလင်နိုင်ငံထူထောင်သူများဖြစ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေသ တခုလုံးကို မူဆလင်တို့သိမ်းပိုက်ချိန်မှာ ၁၄ ရာစု အကုန်ပိုင်းမှသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကိုထောက်ရှုရင် “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုသူများရဲ့သမိုင်းလိမ်လုပ်ဇာတ်မှာပါတဲ့ ၈ ရာစု ၉ ရာစုနှစ်များက သင်္ဘောပျက်ဇာတ်လမ်းများနဲ့ အဲဒီအချိန်ကတည်းက ရခိုင်ပြည်ကို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ ယုတ္တိမရှိကြောင်း ထင်ရှားပါတယ်။ ၈ ရာစု ၉ ရာစုက ယခုခေတ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ မူဆလင်ဦးရေအများဆုံးရှိတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုတောင် မူဆလင်များမရောက်သေးပါ။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ အဲဒီအချိန်က သီရိဝိဇယနိုင်ငံတော်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခရစ် သက္ကရာဇ် ၈၂၅ ကတည်ထားခဲ့တဲ့ “များလှစေတီ” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Borobudur စေတီကြီးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံး ဗုဒ္ဒဘာသာစေတီကြီးဖြစ်ပြီး ယခုခေတ်အထိတည်ရှိနေပါသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ရခိုင်ပြည်မှာ ကိုလိုနီအရာရှိကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာကြီး မောရစ်ကောလစ်ကလည်း “ဘင်္ဂလားနယ်ကို အစ္စလမ်ဘာသာ ၁၂ဝ၃ ခုနှစ်က စတင်ရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ (မြန်မာပြည်ပါဝင်တဲ့) အင်ဒိုချိုင်းနားကျွန်းဆွယ်မှာတော့ ၁၄၃ဝ ခုနှစ်အထိ မူဆလင်ဘာသာ အငွေ့အသက်များလုံးဝမရှိခဲ့” လို့ အတိအလင်းရေးထားခဲ့ပါတယ်။
ပါရှားစကားမှာ ကမန်ဆိုတာ “လေး” ကိုခေါ်တာပြစ်ပြီး “ကမန်ချီ” ဆိုတာ လေးသည်တော်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ရခိုင် ဘုရင်တွေဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ကြေးစားစစ်သည်တော်တွေအဖြစ် ငှားရမ်းထားကြောင်းကို ၁၆၃ဝ မှာ မြောက်ဦးမြို့ တော်ကို ဘရင်ဂျီဘာသာ သာသနာပြုရန် ရောက်ရှိလာတဲ့ ပေါ်တူဂီ ခရစ်ယန်ဘုန်းကြီး မန်နရိကေး (Manarique) က မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ပါရှန်နဲ့အာဖဂန် ကြေးစားစစ်သည်တော်တွေဟာ လေးသည်တော်တွေဖြစ်လို့ သူတို့ကို “က မန်” လို့ ခေါ်ကြတယ်။ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံသား ရခိုင်သမိုင်းပါရဂူ ယတ်ခ်လိုက်ဒါ (Jacques Leider) က ရခိုင်ဘုရင်များ ပါရှန် နဲ့အာဖဂန် ကြေးစားစစ်သည်တော်တွေ စတင်ခန့်ထားချိန်ကို ၁၇ ရာစု အစပိုင်းလောက်ကသာအစောဆုံးဖြစ်နိုင်ကြောင်းရေးထားပါတယ်။
(၂) “ရွေဘို ဒစ်စရိတ် ဂေဇက်တီးယား” (Shwebo District Gazetteer) အပိုင်းတစ် အခန်း ၃ တွင် ရေးထားတာကတော့ မြေဒူးမူဆလင်တွေဟာ တပင်ရွှေထီး သံတွဲကဖမ်းခေါ်သွားတဲ့ ဘင်္ဂလီဘရားကျွန်တွေရဲ့ အဆက်အနွယ်လို့ ယူဆကြတယ်။
ဗမာရာဇဝင်တွေမှာ တပင်ရွှေထီး သံတွဲကိုသိမ်းနိုင်ကြောင်း၊ မြောက်ဦးတိုက်ပွဲရှုံးလို့ တပ်ဆုတ်ခဲ့ရကြောင်းရေးထားပေမဲ့ ရ ခိုင်ရာဇဝင်တွေမှာ တပင်ရွှေထီး သံတွဲကို မသိမ်းနိုင်ကြောင်း၊ တပင်ရွှေထီးရဲ့ ကြည်းတပ်ဟာ တောင်ကုပ်တောင်ကြား လမ်းမရောက်မီနဲ့ရေတပ်ဟာလည်း နဂရေအငူလို့လည်းခေါ်ကြတဲ့ “နဂါးရစ်” အငူ (မော်တင်စွန်း) မှာ ရခိုင်တပ်တွေရဲ့ အ တိုက်ခံရပြီး တပ်ပျက်လုနီးနီးဖြစ်တာကြောင့် ရဟန်းတော်တွေကိုအကူအညီတောင်းပြီး တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံ မကျူးကျော်ရေး စာချုပ်ချုပ်ပြီး တပင်ရွှေထီးနဲ့ယောက်ဖတော် ကျော်ထင်အနော်ရထာတို့ ပြန်သွားရကြောင်း ရေးထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြေဒူးမူဆလင်များရဲ့ဇစ်မြစ်ကို ကောက်ချက်ချရင် ….
ရှိတ်မူဂျီဘို ရာမန် ကလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗမာပြည်ရဲ့ အရသာကိုသိသွားတဲ့ ဘင်္ဂလီအများစုကတော့ တဖြည်းဖြည်း တရားမဝင် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြတာပါဘဲ။ ဒါကြောင့်လည်း ၁၉၇၅ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြို့မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံအမတ် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ မစ္စတာကိုင်ဇာက မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ တရားမဝင်ရောက်ရှိနေသော ဘင်္ဂလာ ဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သား ငါးသိန်းကျော်ရှိနေသေးကြောင်း သူ့ကိုပြောတယ်လို့ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာဗြိတိသျှသံအမတ် O’Brien က သူ့အစိုးရဆီနဲ့ ဓနသဟာယနိုင်ငံများအဖွဲ့ဆီကိုပို့တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ရေးထားပါတယ်။ (ဒီစာရဲ့ဖိုတိုကော်ပီ စာရေးသူဆီမှရှိပါတယ်)။ ဒီ ဘင်္ဂလီတွေကိုတော့ အရှေ့ပါကစ္စတန်လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲအတွင်း ရောက်လာတဲ့ဘင်္ဂလီ၊ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲ နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီလူဝင်မှုလှိုင်းကြီးလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကတော့ နာမည်မကောင်းခဲ့လို့ ဝိုင်းပယ်ခံနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ရပြီး အမှန်ကိုပြောပေမဲ့ ‘ကျားကျား မီး ယပ်’ အလုပ်ခံခဲ့ရတယ်။ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတွေလှေနဲ့ထွက်သွားပြီး ရောက်ရာနိုင်ငံမှာ မြန်မာပြည်က ‘ရိုဟင်ဂျာ’ ဆိုပြီး ညာကြတယ်၊ မြန်မာစကားပြန်ခေါ်လာပေးတော့လည်း မြန်မာစကားမတတ်ဘူး။ ဘင်္ဂလီစကားပြန်ပေးပါလို့ပြော လာပြန် တယ်၊ အဲဒီလိုလူတွေကို မြန်မာပြည်ကလူတွေဆိုပြီး မီဒီယာတချို့က ဝင်လိမ်ပေးကြတယ်။ အင်္ဂလန်က လာပါတယ်ဆိုပြီး ရုရှားစကားပြန်တောင်းတဲ့သူတွေကို ကျုပ်တို့က မတရားသက်သေဝင်လုပ်ရင် သူတို့လက်ခံမှာလားလို့သာ မေးချင်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ “ယာရှင်ကို မျောက်မောင်း” “သူခိုးကလူလူဟစ်” ဆိုတဲ့ စကားပုံတွေအတိုင်း အစွန်းရောက်မူဆလင်များရဲ့ မတရား ဝါဒဖြန့်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ ဗမာတွေနဲ့ ရခိုင်တွေဟာ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ခံနေရပါတယ်။ သမိုင်းလိမ် ဓါတ်ပုံ လိမ်တွေကိုပြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မူဆလင် အဓိကရုဏ်း ဖြစ်သလိုလို ရခိုင်နဲ့ဗမာတွေကဘဲ အင်မတန် သနားစရာကောင်းတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို သွေးချောင်းစီး သတ်နေသလိုလို ကမ္ဘာအနှံ့မှာ လျှောက်ပြီး ဝါဒဖြန့်ကြ ပါတော့တယ်။ အဲဒီ ဝါဒဖြန့်ချက်ဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအပါအဝင် အနောက်တိုင်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာတော့ ထိရောက်မှုမရှိလှပေမဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ် များတဲ့ မူဆလင်ကမ္ဘာမှာတော့ အတော်လေးထိရောက်မှုရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဟာ ဖိအားပေးတာတို့ ခြိမ်းခြောက်တာတို့ လုပ်တာကို ခံနေရပါတယ်။
Tags: ခင်မောင်စော (ဘာလင်), ဘင်္ဂလီ, ဘင်္ဂါလီ, ရခိုင်, ပြည်တွင်းစစ်
3 Responses to ခင်မောင်စော (ဘာလင်) ● ရခိုင်ပြည်တွင်းရှိ ဘင်္ဂလီပြဿနာအကြာင်းရင်း
Zaw Min on August 29, 2017 at 10:28 am
Dr. Thiha Maung on August 30, 2017 at 11:57 am
Mr Khin Maung Saw(Berlin)
very good article, informative and telling the truth with concrete references.
You should also mention in English Version so that many foreigners can know.
It should be more widely spread put in International Media.
Those who have limited knowledge and lack of critical,analytical thinking will accept the false information.
Dr. Thiha Maung(Kambawza)
Khin Maung Saw on August 30, 2017 at 7:38 pm
Dear Dr.Thiha Maung
Thank you for your advice. In fact,I have written many articles, including two books in English. The first book is with the title “BehindThe Mask”, the Truth behind the name ‘Rohingya’. The second book’s title is: “Arakan,aNeglected Land and her Voiceless People”. Both books were published in 2016 and are aviable inabook stall in Pansoedan Middle Block,Yangon. Most of my articles can be seen in my facebook khinmaungsaw.berlin. Otherwise, you may contact me via e-mail khin46@yahoo.de